ပါကစ္စတန်ရှိလိင်တူချစ်သူများအခွင့်အရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ပါကစ္စတန်ရှိမရှိလိင်တူချစ်သူအခွင့်အရေးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။6အောက်တိုဘာလ 1860 ခုနှစ်မှစ. က (တူညီကျား, မများ၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ရှိသည်ဖို့) လိင်တူဆက်ဆံပြုမူသောအမှုတွင်ပါဝင်ရန်တရားမဝင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယအိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်အတွင်းနှင့်မတူဘဲဤဥပဒေတွင်သေးရုပ်သိမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဆည်းပူး) မခံတော်မူပြီ။ လိင်တူချစ်ခြင်းလည်းပါကစ္စတန်မညီကြောင်းဒုအဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ပါကစ္စတန်ရှိအဓိကဘာသာတရားလိင်တူချစ်သူများ၏အတည်ပြုကြပါဘူး။ ထိုကြောင့်, တိုင်းပြည်အတွက်များစွာသောလူလိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏အခြားပုံစံများကိုဆန့်ကျင်ကြသည်။.
ပါကစ္စတန်ကတရားဝင်အနေနဲ့အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံသည်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်, ပါကစ္စတန် (Non-ဘာသာရေး) အဓိကအားလောကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ဗြိတိသျှထံမှအမွေဆက်ခံခဲ့ကြသည်သော -Anglo-Saxon ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။ ပို. ပို. , တိုင်းပြည်အတွက် (ပိုလစ်ဘရယ်ဖြစ်လာ) လွတ်လပ်၏ခေတ်ရေစီးကြောင်း (သို့မဟုတ်ပုံစံများ) ရှိပါတယ်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်လူမှုရေးသည်းခံစိတ်လည်းတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။ ထိုကြောင့်, အများပြည်သူလိင်တူချစ်သူပါတီများနိုင်ငံအတွင်းရာအရပျကိုယူပြီးခဲ့ကြနှင့်, ဤပါတီများနှစ်ပေါင်းအတော်များများသည်အအောင်မြင်ပါပြီ။.
↑ Walsh, Declan။ "Pakistani society looks other way as gay men party"၊ London: The Guardian Newspaper၊ 2006-03-14။ 2008-05-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပါကစ္စတန်ရှိလိင်တူချစ်သူများအခွင့်အရေး&oldid=339306" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၃:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။